Iifografi kunye neengxaki zobulunga | I-Foundation Foundation
Ikhaya Ngathi Iifografi kunye neengxaki zobundlobongela
I-TRF iveza ii-RCGP zeeNgqungquthela eziVunyelweyo
Ukuba ufuna ukufunda okungakumbi malunga nefuthe le-intanethi kunye nokungasebenzi kakuhle ngokwesondo, yiza kumasifundisane wethu okwelo gama. Ivunyiwe yiKholeji yaseRoyal yaBasebenzi ngokubanzi. Umasifundisane uxabisa iikhredithi ze-7 ze-CPD kumasifundisane osuku lonke kunye neekhredithi ezi-4 zolu hlobo losuku olunesiqingatha Iyafumaneka e-UK nakwiRiphabhlikhi yaseIreland. Ndiyacela zoqhagamshelwano nathi ukuba unqwenela ukuva ngakumbi malunga neendibano zocweyo ezizayo okanye ukulungiselela umsitho kwindawo yakho. Sihambise olu qeqesho ngaphezulu kwamaxesha angama-20.
Ukuhanjiswa kwalo masifundisane kunqunyanyisiwe kulo lonke ixesha lesifo sikaCovid.
Ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kwe-intanethi ye-intanethi ngokukhawuleza kuvela njengengxaki yokuziphatha ngokwesondo. Oku kuyahambelana nokusetyenziswa okukhulu kwama-smartphones kunye nokufikelela okulula kwividiyo yokuhambisa kwixesha elidlulileyo le-10. Uluhlu lweengxaki zempilo yengqondo kunye nempilo luye lwaqhubeka. Ngokomzekelo, ukwanda okwenyukayo kwi-erectile ukungasebenzi kubantu abancinci, ubungqina obuninzi bokuneliseka ngokwesini kwindoda nabasetyhini, kunye nokuxhalaba kweentlalo kunye nomzimba onokutshatyalaliswa kwintsholongwane yonke ibonakala ngathi ihambelana nale nkcubeko.
Abasebenzi bezempilo kufuneka babazi ubungqina obuxhasa imodeli yokulutha. Kukho iindlela ezifanelekileyo zonyango kunye nezonyango ezonyusa ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kubandakanya ukumiselwa okusebenzayo kwezentlalo.
Le ndibano inxibelelanayo iya kubonelela ngentshayelelo kwi-neuroscience yeziyobisi ngokubanzi kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi kusetyenziswa iphonografi, ngokubhekisele kuphando lwamva nje. Siza kujonga iintlobo ezahlukeneyo zempilo yomzimba kunye neemeko zempilo yengqondo ezinxulumene nokusetyenziswa kwe-porn ezivela kuphando. Siza kukhuthaza ukuxoxa okubonakalayo phakathi kweengcali malunga nendlela elungileyo yokusebenza, ukuphuculwa okunokwenzeka, kunye nokukhetha uphawu lokubuyisela uphawu.
Iworkshop yemihla ngemihla malunga neeManyala kunye neeDysfunctions
Okwangoku asinazo iindibano zocweyo zosuku olupheleleyo ezicwangcisiweyo ngenxa yobhubhane weCoronavirus, kodwa sivulelekile kwiingcebiso zokuba ungathanda nini kwaye phi.
I-09.00-Intshayelelo kwi-intanethi ye-intanethi, I-Great Porn, i-World Health Organisation inkcazo yezempilo yezesondo, i-ICD-11 kunye nokunyanzeliswa kokuziphatha ngokwesondo, iimodeli zokuxhatshazwa kunye neempawu zengqondo, iipatheni zokuziphatha komsebenzisi kunye nokunyuka kwezinto ezinamandla
I-10.45-Ukusetyenziswa kwamanyala kunye nemingcipheko- iimpembelelo zengqondo nezomzimba, kubandakanya ukungasebenzi kakuhle ngokwesondo kulutsha, amadoda nabafazi. Iingxoxo zeqela elincinci, ukubuza abathengi malunga nokusebenzisa kwabo iphonografi, emva koko iqela lonke lixoxa. Iipateni zokusebenzisa ulutsha, imeko yezesondo, ukutshintsha kweendlela zokuziphatha ngokwesondo kuluntu lonke, imiba yezempilo yengqondo, ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo, abantwana abangamanyala ngokwesondo kunye nendima yamanyala kubundlobongela basekhaya. Iseshoni ye-Q & A.
I-14.00-Imifanekiso engamanyala kunye nemicimbi yokwahluka ngokwesondo, ukuvavanywa kweengxaki zomsebenzisi kunye nokubonelela ngezixhobo zokuxhasa ukomelela. Imifanekiso engamanyala njengengxaki yokuphila kwi-LGBTQI + kunye noluntu lwe-MSM, i-comorbidities, i-chemsex, ukhetho lwezonyango, i-Problematic Pornography Use Scale, indawo yokubuyisela i-intanethi kunye nokuyalelwa kwezentlalo. Iingxoxo zamaqela.
I-15.30 -Ukubuyisela kunye nokuthintela -Yintoni iphonografi kakhulu? Unyango kunye nokukhetha kwezemfundo, umlutha, ukurhoxa, 'ukucoca', ingqondo, i-CBT kunye nonyango lweziyobisi. Siphela ngokwakha ukuqonda kwe-intanethi kwi-kliniki yakho.
16.20 -Uvavanyo kunye nokuvala.
Mary Sharpe ngumseki kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba sokuqhutywa kwesisa kwezemfundo Isiseko soMvuzo -Uthando, isini kunye ne-Intanethi. Ubonakalisa iimpembelelo zentengiso engamanyala kwi-Intanethi kubaqeqeshi bezempilo, kwezomthetho wolwaphulo-mthetho kunye nemfundo nakwizikolo kwiminyaka edlulileyo ye5. UMariya wayelilungu leBhodi yombutho woPhuculo lweMpilo yezeSondo eMelika ukusuka kwi2016 ukuya kwi2019.
UMary wayezinze kwiYunivesithi yaseCambridge iminyaka elishumi. Apho wenza uphando ngeNATO yeNzululwazi ngenkqubo yoXolo noKhuseleko. Wayengumlobi wezenzululwazi kwiCambridge-MIT Institute. Lo yayingumsebenzi awayewenzile ngaphambili kwiKhomishini yaseYurophu eBrussels. Uye wafundisa abafundi kunye nabasebenzi ekugcineni ukusebenza okuphezulu ngeendibano zocweyo kwizakhono zobomi nolawulo loxinzelelo. Ngo-2020 uMary wabuyela kwiYunivesithi yaseCambridge njengoMfundi oNdwendweleyo kwiKholeji yaseLucy Cavendish. UMariya wayesebenza kwezomthetho njengegqwetha kunye neGqwetha ngaphezulu kweminyaka eli-15. Upapashe kwimiba emininzi yempilo, isini kunye nomthetho kwaye wathetha kwiinkomfa kwihlabathi liphela. Uyakonwabela ukufundisa ubuso ngobuso kunye nengxoxo. I-biografi eneenkcukacha zikaMariya iyafumaneka Apha.
Darryl Mead I-PhD yingcali ye-intanethi kunye nomphandi kwishishini lamanyala. Kwindima yakhe njengoSihlalo weSiseko soMvuzo ugxila kwimpembelelo yokusebenzisa iphonografi kwindlela yokuziphatha kulutsha nakubantu abadala. UDarryl uphuhlisa iimpendulo zomgaqo-nkqubo omtsha kwimiceli mngeni yezempilo eyenziwe kukwamkelwa ngokubanzi kokubukela iphonografi njengesiqhelo sokuzonwabisa kwabantu abaninzi. Njengomphathi omkhulu kwilayibrari yeSizwe yaseScotland, uDarryl wanceda ukuseka inkqubo esetyenziswa yi-UK kugcino lwe-intanethi. Utitshala oqeqeshiweyo, ebambe iindima zangaphambili njengomnxibelelanisi wesayensi kwaye unolwazi oluchongiweyo (FCLIP).
Imibuzo? Eminye imibuzo? Nceda uqhagamshelane ne-Foundation Reward Foundation nge-imeyili: info@rewardfoundation.org okanye iselula: 07506475204.